Knowingmara Mgbe ahụ Ihe Ọ Maara Ugbu a, #MyHodgesStory »Hodges U
Knowingmara Mgbe ahụ Ihe Ọ Maara Ugbu a
Knowingmara Mgbe ahụ Ihe Ọ Maara Ugbu a - #MyHodgesStory Martha "Dotty" Faul
Ogologo oge tupu Martha “Dotty” Faul debara aha na Mahadum Hodges, ọ nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 na-arụ ọrụ na ndị mmanye iwu na DeSoto County Sheriff's Office na Charlotte County Sheriff's Office.
Site na ị na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ dị ka onye na-esote sheriff ka ọ na-ejikwa nyocha ndị omempụ dịka onye nyocha, Faul ahụla ma hụ ihe ọtụtụ nwere ike iche n'echiche. Nọdụ n'akụkụ iwu nke nwere ike ịdaba na nsogbu na-adịghị mma nke ụmụ mmadụ, Faul lara ezumike nká na August 2009 wee mepee azụmahịa nke ya, Ọrụ nyocha ikpe ziri ezi, Inc.,, na 2010 dị ka ụzọ isi nyere ndị nọ ná mkpa aka.
Mgbe ọ malitere ịmalite ọrụ ya, ọ chọpụtara mkpa ọ dị ogo ga-eweta na iwulite ụlọ ọrụ ya. Mgbe ha na-arụ ọrụ na Ọfịs Sheriff nke Charlotte County, ndị nnọchi anya si Mahadum Hodges (nke a maara n'oge ahụ dị ka International College) gara iji tụlee onyinye dị iche iche.
“Ọ na-ewute m na ewereghị m ha maka onyinye ha mgbe ahụ,” ka ọ chịrị ọchị. Ma mgbe oge ruru ka m laghachi n'ụlọ akwụkwọ, echetara m Hodges, ya mere m debara aha n'ụlọ akwụkwọ azụmahịa na 2009. "
Mgbe ọ nọrọ ọnwa isii na mmemme azụmahịa ma na-arụ ọrụ n'ahịa n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Florida, Faul ghọtara na talent ya ka mma maka ikpe ikpe mpụ, ọ bụghị azụmahịa, ya mere ọ gbanwere mmemme nrịgo, na-ewere klaasị ya niile n'ịntanetị.
Dị ka onye na-amụrụ ihe n'Intanet, o kwetara, sị, “Echere m n'ezie na e lekwasịrị m anya karị n'ihi na bọọdụ mkparịta ụka ndị ahụ nyere m ohere ikwu okwu, ndị nkụzi ahụ dịkwa njikere ozugbo. Enweghị m nchegbu banyere oge gwụchara klaasị ma jiri ọsọ gaa n'ihu ịjụ prọfesọ ahụ ajụjụ. ”
N’ịme ka ọtụtụ afọ nke ahụmịhe ya na ndị mmanye iwu rụọ ọrụ n’usoro ihe ọmụmụ ya, Faul ghọtara na ọtụtụ ọrụ ọrụ ya lekwasịrị anya naanị n’otu mpaghara, yana otu usoro ọmụmụ si nyere nghọta bara uru n’ọgbọ egwuregwu sara mbara nke bụ ikpe mkpegbu.
Ihe ọmụmụ ndị ahụ kụziiri m banyere njikwa, mgbazi na ikpe ụmụaka. Amụtara m ọtụtụ ihe banyere akụkọ ihe mere eme nke ikpe mpụ na otu ọdịbendị dị iche iche si agakwuru ikpe mpụ, "ka o kwuru.
Enweta ya Nzere bachelọ na Ikpe Ikpe Ikpe na 2012, ọ lekwasịrị anya na mbọ ya na-ewulite azụmaahịa ya. Ya na ndị otu ya na ndị ọrụ nyocha 20 na-arụ ọrụ na steeti Florida iji nyere ndị ogbenye aka na usoro ikpe mkpegbu ndị na-enweghị ike ị nweta nchekwa. Na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị ọka iwu, Faul na ndị otu ya na-eji nka ha enyere aka n'ịchịkọta eziokwu, ihe akaebe na ozi iji wulite ikpe dị irè.
Ọ bụ ezie na okwu ndị a sitere na wayo na igbu ọchụ na ndị na-efu efu, Faul na-eji nka ya na nchọpụta ụgha na aghụghọ iji nyere aka na nyocha ahụ; n'agbanyeghị, n'ihi ụdị azụmahịa ya na njikọ ya na usoro iwu, ọ tụgharịrị ọzọ na Hodges ịga n'ihu agụmakwụkwọ ya, naanị oge a na ọmụmụ iwu.
"Agwara m Dr. [Char] Wendel, ọ gwara m na ọmụmụ iwu dị iche karịa ikpe mpụ, mana achọpụtala m na m hụrụ ya n'anya, ha abụọ na-aga ụkwụ na aka," ka o kwuru .
Idebanye aha na Master nke Science na Iwu Iwu Usoro ihe omume na 2016, Faul kwetara na usoro ọmụmụ na ọrụ enyerela ya aka itinye aka na azụmahịa ya n'ụzọ ọhụrụ. Ulmụta maka nsogbu, nnabata na okwu ikpe, Faul na-eji ihe ọmụma iji nyere aka ịgbanwe ụzọ ya na ndị otu ya nwere ike isi nyere ndị ọka iwu ha aka.
“Knowingmara otú iwu si arụ ọrụ na-enyere gị aka karị ma ị pụọ n'okporo ámá. Ọ bụrụ na m maara ihe ga-eme n'ụlọ ikpe na ihe kpatara ha ji chọọ ihe ụfọdụ, ọ ga-eme ka ikpe m ka mma nke ukwuu, ”ka ọ kọwara. "Ugbu a, n'akụkụ nke ọzọ, amaara m ihe ha kwesịrị ime, ya mere apụrụ m ịnye ya ndị ọka iwu m ka ha nyere ha aka."
Naanị izu ole na ole fọdụrụ tupu ọ gụsịrị akwụkwọ na December 2017 na ogo mmụta nna ya ukwu, Faul na-atụ anya iwere ihe ọmụma ya na ahụmịhe ọkachamara ya ma gbasaa nka ya na ngalaba nkuzi.
Enweela m ọtụtụ ihe dị iche iche, achọkwara m iweghachi ụfọdụ n'ime nke ahụ, na nkuzi bụ ụzọ dị mma iji mee ya. Inwe ike ịkọrọ ụfọdụ n'ime ahụmịhe m ma kerịta ụfọdụ ihe ọmụma m mụtara na otu esi etinye ya n'ọrụ - ọ ga-abụrịrị afọ ojuju nye m.
Tags: Ikpe ikpe omekome, Mahadum Hodges, UduU, Ihe gbasara iwu, Martha Faul, Nna-ukwu nke Mmụta Iwu, Nọrọ Nso Ga